Fampianarana : sekoly tsy miankina 600 mijoro tsy ara-dalàna | NewsMada
Fampianarana : sekoly tsy miankina 600 mijoro tsy ara-dalàna
Mitohy ny fanaraha-maso akaiky ataon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena amin’ireo sekoly tsy miankina maniry toy ny anana eraky ny elakela-trano eto Antananarivo Renivohitra sy manerana ny Nosy.
Raha ny tatitra voaray avy amin’ireo Dren manerana ny Nosy, fantatra izao fa sekoly tsy miankina manodidina ny 600 no mijoro an-tsokosoko sy tsy ara-dalàna ary mampianatra tsy ampihambahambana.
« Mila mikarakara ny antontan-taratasy rehetra maha ara-dalàna azy ireo sekoly ireo hatramin’ny fidiran’ny taom-pianarana vaovao 2016-2017, mba tsy hidirana amin’ny fanasaziana », hoy ny tompon’andraikitra.
Raha ny fanazavana hatrany, sekoly mampianatra ankizikely avokoa ny ankamaroan’ireo misokatra tsy ara-dalana ireo. Tsy manana fahazoan-dalana hampianatra akory aza ny ankamaroan’ireo mpampianatra amin’izany. Eto Antananarivo Renivohitra ny dimy amin’ireo sekoly tsy ara-dalàna ireo.
Tsy fantatry ny ray aman-dreny mampiana-janaka ny maha ara-dalàna na tsia ireny sekoly tsy miankina ireny. Rehefa akaiky trano sy manala ny fahasahiranana dia ampidirana ny ankizy. Manimba ny hoavin’ny zaza anefa ireny sekoly miorina tsy ara-dalàna ireny, indrindra ireo mampiasa mpampianatra sandoka na tsy niofana ho mpampianatra akory.
Mila mailo, araka izany, ny ray aman-dreny. Misy ihany ireo maty an-kazotokana amin’ny sekoly efa fanta-daza sy ela nihetezana teo amin’ny fampianarana ho fitsinjovana ny hoavin’ny taranany.